Free TomTom Maps - you ma ka esi emelite TomTom gị? | Akụkọ akụrụngwa
Ị chọrọ melite TomTom gị? Taa, anyị nwere ọtụtụ ụzọ iji ruo ebe anyị na-aga. N’ebe dị anya bụ nnukwu map ndị ahụ anyị nwere ike ịkọwa, ma ọ siri ike karịa ịkpọtụrụ ha ma tinye ha n’ime oghere aka. Ugbu a, anyị niile nwere ọtụtụ map ndị ahụ n'akpa anyị, na ama anyị. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị na-ahụ maka GPS GPS desktọọpụ nwere antennas buru ibu ma ọ ga-abụkarị ihe ziri ezi karịa igwe anyị na ndị na-akwọ ụgbọ mmiri a ma ama bụ ndị TomTom na-arụ ọrụ ha.
na TomTom maapụ nye anyị ọtụtụ ozi Ma otu a ka odi ogologo oge. Ihe omuma abughi ihe obula ozugbo uzo di iche iche gbanwere, ya mere n'ime onwa isii, dabere na mpaghara ebe anyi bi, anyi nwere ike inwe GPS nke na-eduzi anyi n'ime ebe ndi na adighi. Ihe dị mma bụ na kwalite TomTom maka n'efu ozi a bu ihe doro anya. Ihe dị njọ bụ na anyị ga-akwụ ụgwọ dị ukwuu iji debe ngwaọrụ anyị. Ọ bụrụ na, n’agbanyeghi ihe kpatara ya, anyị enweghị ike ịnagide ihe anyị mefuru, anyị nwere ike ibudata map ndị ahụ n’ụzọ ọzọ mgbe niile.
1 Budata TomTom Maps n'efu
2 Wụnye Maapụ TomTom
3 Mee ọ rụọ ọrụ TomTom Maps na fantactivate
4 Etu esi etinye Radars na TomTom
4.1 955/956 Chart Ndakọrịta Chart
4.2 Isiokwu Ndakọrịta 960
Budata TomTom Maps n'efu
Zọ kachasị mma iji debe desktọọpụ anyị TomTom mgbe niile bụ gaa na ogbako na Forokeys.com. Na Forokeys anyị nwere ozi niile dị mkpa nke na TomTom anyị na-enye anyị ozi ziri ezi ma ọ bụghị dị ka enyi m na-ekwu, na kama TomTom ọ bụ onye nzuzu «nzuzu». Mana na Forokeys enwere naanị maapụ maka TomTom, mana enwerekwa ihe mkpali ndị ọzọ ga - eme ka onye na - akwọ ụgbọ mmiri anyị ụzọ ngwaọrụ.
Mkpali m na-ekwu maka ya bụ isi ihe, nke amara dị ka POI (Isi nke Mmasị) ma ọ bụ POI. N'ime ihe ndị masịrị anyị nwekwara ofu rada, ụfọdụ rada nke iwu ga-ebipụta, mana ọ ka mma mgbe niile ka etinye ha na onye nchọgharị GPS anyị karịa ka anyị wee mata ihe ọmụma nke DGT (General Directorate of Traffic) oge ọ bụla anyị gara ime njem site na mpaghara. na anyị maara.
Iji nwee ike iji maapụ TomTom, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịchọta ndị masịrị anyị. Iji mee nke a, mgbe ị debanyere aha, anyị nwere ike ịme ọchụchọ na nnọkọ ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ maapụ Spain, kedụ ihe ị masịrị gị ịchọ “Iberia” ma ọ bụ “Europe”. Ozugbo ebudatara maapụ ahụ, ọ ga - arụ ọrụ, nke ị ga - ebudatakwa onye na-eme ka ya nke ahụ dị na nnọkọ ahụ.
TomTom na-enye map oge ndụ niile na ntanetị ya
Nbudata maapụ na ForoKeys adịghị iche na otu anyị si eme ya na ọtụtụ weebụsaịtị maka nbudata faịlụ nke ụdị a (na-edeghị iwu). Na nnọkọ anyị ga-ahụ post na njikọ TomTom map na anyị na-achọ, njikọ ndị a ga-akpọrọ anyị gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-ebudata map na otu n'ime ngalaba iji budata faịlụ ndị kachasị ama (dị ka Mega, mana nke a dị ka ọ bụ naanị maka ndị ọrụ VIP forum). Ozugbo ebudatara anyị ga-etinye ha.
Wụnye Maapụ TomTom
Wụnye maapụ na Tomtom GPS Desktọpụ adịghị mgbagwoju anya ma ọlị (ihe mgbagwoju anya na-abịa mgbe e mesịrị). Iji wụnye ya, anyị ga-eme ihe ndị a:
Anyị na-ejikọ eriri USB na GPS na kọmputa (Windows, ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ).
Anyị chọtara faịlụ ahụ ebudatara ma wepu ya (ọ bụrụ na agbakwunye ya).
Na "My PC" anyị ga-ahụ TomTom anyị ka ọ nwere ike ịnyapụ. Anyị na-emeghe ya.
Anyị pịa nri ma mepụta folda.
Anyị weghachite folda ahụ na otu aha ahụ faịlụ ahụ ebudatara. Dị ezigbo mkpa na ọ nwere otu aha ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na anyị ebudatara "east_europe.zip", a ga-akpọ folda anyị "east_europe" (na-enweghị nkwupụta n'okwu abụọ ahụ).
Anyị na-e copyomi data site na faịlụ unzipped n'ime folda ọhụrụ ahụ ma anyị ga-etinyeworị ha, mana anyị ka ga-arụ ọrụ ha.
Mee ọ rụọ ọrụ TomTom Maps na fantactivate
Enwere ụzọ ndị ọzọ, mana echere m na nke a bụ ihe kachasị mfe na kachasị ọsọ. Nwere ike ibudata "fantactivate" si ForoKeys; dị ka ofu post. Iji rụọ ọrụ map anyị ga-eme ihe ndị a:
Anyị jikọọ GPS anyị TomTom na Windows PC anyị.
Anyị na-enweta draịvụ Tomtom anyị na PC anyị.
Anyị na-edepụta faịlụ FastActivate.exe na mgbọrọgwụ nke ebe nchekwa dị n'ime GPS. Ọ bụrụ na anyị nwere kaadị, ka mma na kaadị SD.
Anyị na-agba ọsọ FastActivate.exe
Anyị na-pịa ọnụ ọgụgụ nke menu anyị chọrọ. I kwesiri itinye nọmba 4.
Etu esi etinye Radars na TomTom
Anyị nwekwara ike ịwụnye POI (Ihe Mmasị) na desktọọpụ anyị TomTom. Mara otu esi etinye map TomTom, wụnye rada nke mere na ha dọrọ anyị aka na ntị ma ghara ịse foto bụ egwuregwu ụmụaka. Naanị anyị kwesịrị ịdọrọ faịlụ ndị anyị budatara, nke na-enwekarị aha dị ka "radars_fijos.ov2" (na ndị ọzọ nwere mgbatị dị iche), na folda map achọrọ.
Ọ dị mkpa ikwu nke ahụ, n'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na anyị ebudata isi ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụ rada si Spain, anyị ga-e copyomi ha n'ime folda "Iberia" ma ọ bụ maapụ nwere Spain, dịka Europe. Ndị rada nke Spain agaghị arụ ọrụ na eserese Asia ma, ozugbo anyị hapụrụ mba ebe anyị rụnyere rada ahụ, anyị ga-akwụsị ịnata ịdọ aka na ntị. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ahụrụ m rada nke Spain na map nke Europe, nke kachasị adaba bụ jiri isi ihe na-adọrọ mmasị naanị na map ndị e kere ha. Ọ ka mma igbochi karịa ịgwọ ya.
955/956 Chart Ndakọrịta Chart
Isiokwu Ndakọrịta 960
Ọ bụrụ n’inwere onye nchọgharị desktọọpụ TomTom, i nwekwaghi ihe ngọpu nke mere na ọ na-agwa gị oge niile ka o kwesiri ịdị, ihe dị mkpa oge niile na ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na anyị nọ n'okporo ụzọ. Ọ dịkwa mma ịwụnye rada na map ndị ị na-eji, nke ga-enyere gị aka, karịa ihe niile, ka ndị uwe ojii ghara ịta gị ahụhụ, ihe na-abata mgbe niile na ọbụna karịa ugbu a, na enwere nsogbu dị ukwuu nke o nweghi onye O di nma imefu ego karie ka odi nkpa.
Bụrụ na ọ nwere ike, "Kpachara anya, enyi ọkwọ ụgbọ ala, okporo ụzọ dị egwu." O doro gị anya na otu esi eme ya melite TomTom gị n'efu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » GPS » Free TomTom Maps
Ihe 172 kwuru, hapụ nke gị
Ọ ga-amasị m ịmata nke GPS nwere maapụ nke Argentine Republic na obodo ya kachasị mkpa
Zaghachi Osvaldo Juan Maccio
Maka obi abụọ tomtom, na ihe nchọgharị ndị ọzọ, ana m akwado ụlọ nzukọ javiermb: http://foro.javiermb.com
na map a free, ha compila nke foreros.
Ekele na ekele
Ga-abụ ezigbo nwa nkịta iji rata ndị mmadụ na saịtị porn na-ekwu na ha bụ nbudata GPS map n'efu ...
Ka anyị hụ ma ọ dị ntakịrị ihu na ha tinye sịga site na ịnyịnya ibu ya ...
Ndị enyi kpachara anya maka mmelite navman na DVD 2008
na ha na-eresị gị na CRAMBO n'ihi na ha ekwuputaghị na nchọta maka isi ihe masịrị ha ga-apụ n'anya, n'agbanyeghị agbanyeghị ị na-azọrọ, ha na-ehicha aka ha ma ọtụtụ ihe ha na-eme bụ iziga gị…. (mba mba mba) ha zipụrụ gị LONDON navman iji dozie nsogbu ahụ.
MA Ọ B NOGH SOL NA Naanị na ị na-enye ha ego na ị na-DVD ka mmenyenjo pụọ ibiom
Atụrụ m anya na ị kpachara anya
M na-agbanye tomtom ma ọ gwaghị m map ọ bụla, kedu ka esi ebudata map ọ bụla iji mee ka ọ rụọ ọrụ
Kedụ ka m ga - esi nweta eserese venezuela maka GPS m TOM TOM m ???
Ndewo, m ga-achọ ịgwa m otu esi enweta map maka tomtom one v2, site na Spain na Portugal, mgbe ahụ, mhichapụ ya ma emebeghị m nkwado ndabere, daalụ nyere m aka
Zaghachi okooko osisi
Ndewo, m ga-achọ ka ị gwa m otu esi enweta map maka tomtom one v2, site na Spain na Portugal, mgbe ahụ, m ehichapụ ya na emeghị m nkwado ndabere, daalụ nyere m aka
Kedu ihe bụ ụdị TOM TOM kacha ọhụrụ
AKWESTKWỌ NDERS ỌH OFR OF NKE TLỌ IRI
Kedu otu m si achọ map Mexico maka mbubata GPS 3v4 ị nwere ike ịgwa m ebe m si enweta ha
Ndewo, ị ga-enwe obi ọma ịgwa m otu esi emelite otu tomtom m, daalụ.
Zaghachi miguel angel
dị nnọọ mma niile, ana m ekpughe; Enwerem tom tom 720 laa,
nwere ụdị map v705 ọ ga-amasị m itinye ụdị v8 na ya. onye nwere ndị na-ahụ maka radar na aghụghọ ndị ọzọ, mmadụ nwere ike ịgwa m ebe-esi enweta ya, kelee gị niile n'ọdịnihu.
Ekele, kedụ kedu ka m ga esi enweta map nke Venezuela maka tomtom one¡¡¡¡
Ndewo, enwerem tom3 Edt na enweghị m map maka Venezuela, onye ga - enyere m aka… ..?
Ndewo, m bi na Venezuela na achọrọ m inweta maapụ mba a maka tomtom otu na amaghị m etu esi budata ya, daalụ.
Zaghachi oscar santana
onye ọ bụla maara otú e si melite tomtom one maps.thanks
Ọ ga-amasị m ịmara ma enwere map nke venezuela maka GPS tom tom one.
Zaghachi gustavo de lemos
Peeji ejikọrọ na njikọ dị n'elu na-egosi naanị nhọrọ maka tomtom 5 na 6, ebe m hụrụ tomtom m otu ụdị nke 3
Ana m achọ nke Mexico ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara na m ga-enwe ekele maka azịza gị
TOMTOM NKE dijo
N’agbanyeghi na ha juola, ahụghị m onye zara ya. Onye nwere ike ịghọta otu esi emelite ma ọ bụ budata eserese nke Spain-Andorra-Portugal, maka TomTom ONE. Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu
Zaghachi TOMTOM ONE
Enyi, azụrụ m tomtom otu 125 na enweghị m ike ịchọta map nke Venezuela, ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka otu m ga-esi mee ya ma ọ bụ ebe m nwetara ya, nwee ekele
Zaghachi Luis alfredo
hello enwere m tom tom otu kiero imelite ya so vien ace 7 afọ amaghị m etu o si bụrụ kiero spain portugal na andora
Ekele m ahụla onye ọ bụla na-ajụ onye na-ajụ ma ọ dịghị onye maara ihe ọ bụla? Achọrọ m maapụ nke Venezuela biko ọ bụrụ na ịmara banyere ọdọ mee ka m mara gps bụ tom tom mbipụta nke atọ nke GPS dị ezigbo mma mana maka gringos ọ ga-abụ n'ihi na enwere m ya ọhụụ na igbe ya n'ihi na ọ nyebeghị m aka ma ọ dịghị ma ọlị. helpaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ana m achọ maapụ spain si tomtom 74500, mmadụ maara ebe m ga-ahụ ya
Uwe akwa dijo
kedu ka m ga-esi nweta map nke venezuela maka my tomtom URGENT
-Lọ akụ G-unit dijo
wat the fuck is wrong with tomtom, argentina bu obodo fuckin, ma buru ibu, ha kwesiri inwe map argentinas, onye fuck ga eji GPS na andorra? gwa m nne nne, Achọrọ m map iberibe nke Argentina FREE TOMTOM LA CONCHA DE TU MAMA
Zaghachi G-unit bank
Nwere ike inyere m aka, Achọrọ m maapụ Spain maka tomtom na-aga 300 nchọgharị, ekele 24/02/2009
ernesto ahịa dijo
Ana m ebi na Venezuela ma amaghị m otu esi budata map, ekele m GPS tomtom
Zaghachi ernesto ahịa
Anọ m na usa, mana m na-aga Mexico na achọrọ m ịma ka esi ebudata maapụ maka GPS tom tom 730, ọ bụrụ na mmadụ mara etu esi eme ya, ọ ga-amasị m ka ha mee ka m mara
Zaghachi eleazar jaime
Ndewo onye ọ bụla, onye ọ bụla maara otú m ga-esi tinye nhọrọ ahụ
N'ihe dị mma LANE GUIDE, na tomtom 720 map
maka TOMTOM ONE, budata ya na emule ma obu lphant, o gha akowa otu esi etinye ya, jisie ike
Iji budata eserese na Spain, ọ na-ajụ m paswọọdụ maka faịlụ nkọwa Spain / cline.dat.
GPS usoro maka blackberry
Zaghachi rubi nachar
Ogbodo 1000 dijo
onwere onye ma Koodu maka iberia tinyere
Ọ bụrụ na ị ma onye koodu ahụ nwere ike izigara m biko 664111639
Ndewo m, a na-enwekarị TOM TOM ONE XL NA Achọrọ m ịmata otú m ga-esi nweta map nke VENEZUELA maka akụrụngwa a. DAALỤ N'ỌDỊNIHU.!!!!
Chei, ihe a bu nnoo, nke a dika NGO nke GPS
karia nzuko, mana ekwesighi na ebe a enwere ndi okacha amara n'okwu a
ịza ajụjụ ụfọdụ ??.
Ọ dị m ka ndị geeks niile nọ na mbara ala ezutewo,
Na na anyị enweghị ntakịrị echiche nzuzu nke isiokwu a
(Inwe ma ọ bụrụ na enwere onye ọ bụla zoro aka)
M bi na Spain na anaghị m ebudata maapụ Europe maka gps m (tomtom), mmadụ nwere ike ịgwa m?
Nanị m zụtara 2 tom toms na usa, onye nke xl.
Achọrọ m iji ya na Argentina, ị nwere ike ma ọ bụ hapụ ha na c… .., daalụ
Nnọọ !!! Kedụ ka m ga - esi nweta sọftụwia na map nke mpaghara Iberian Peninsula maka omtom otu mbipụta 2nd?
ebe a ọtụtụ na-arịọ ma ọ dịghị onye na-edozi ihe ọ bụla! Gini bu nzuko nzuko
nke ọma ihe na - eme na ha anaghị aza abụ nke ajụjụ banyere map nke venezuela maka tomtom biko emela ka anyị laa ndị ezigbo na oge n'iyi
Zaghachi marcos catillo
Ndewo, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ka esi enweta map nke Spain n'efu maka ọla edo htc diamond. daalụ ekele
Kedu ka m ga - esi melite maapụ maka Tomtom ONE nke Western Europe
Ndewo Flores, ị nwere nsogbu ahụ edozila? ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kpọtụrụ m, ekele
ebee ka m ga-ahụ maapụ Mexico
maka m n73
xfas mee ka m mara
ozi m bụ anwụnta_rata@hotmail.com
Zaghachi ka martin
Kedu ka m ga-esi melite nsụgharị ọhụrụ nke map maka ụlọ otu XL.
Tomtom Venezuela Maps dijo
Ndewo ụtụtụ ọma, kedu ebe m ga-ahụ map maka Venezuela maka tumtum m otu mbipụta nke atọ
Zaghachi Tomtom Venezuela Maps
ndewo ezigbo mgbede Achọrọ m ịma ụfọdụ njikọ iji budata maapụ Europe maka tomtom otu
mgbe niile, ihe niile iji banye na peeji nke pornos, NO AGAN CASE HA B NOTGH RE PSLỌ MAKA
mgbe niile, ihe niile iji banye na peeji nke pornos, B DOGH AG KWES THEYR THEY THEYB THEYR THEY AREB AREGH RE PSB RERAL ALLỌ, HA B ARE INKgha ụgha
buru ibu, ihe niile ịbanye na peeji nke pornos, Adịghị AGAN CASE HA B NOTGH MA PSLỌ MAKA, HA B ARE ,gha ụgha
Ndewo, enwere m TomTom One XL, Biko, ehichapụlarị mmemme Share Map na m ga-achọ ka mmadụ zitere m mmemme a site na email.
Javier nwere uche dijo
Nye ndị na-arịọ maka map venezuela maka tomtom m ga-agwa gị otu ihe. Ha nwere ọ dị mfe, na-arịọ enyi ha Chavez na okwu ahụ.
Zaghachi Javier Shrew
Ugochi iwuagwu dijo
Ndewo, naanị m zụtara TOM TOM ONE GPS ma achọrọ m ịma ebe m nwere ike ibudata map nke Mexico ebe ha dị oke ọnụ maka ọrịre
Daalụ maka nlebara anya
Zaghachi David Benitez
ebee ka m nwere ike ịhụ maapụ nke poloni i ukrania ?????????????????
Zaghachi ka dimon
Lee ihu iberibe!
Enwere naanị ajụjụ ma ọ dịghị onye na-aza ọ bụla!
Echere m na nchikọta nke ndị nlekọta na-adịgide adịgide na ezumike.
na? cd anyị nwere ike ịnweta map nke Argentina
Ndewo Ọ ga-amasị m ịmara ebe m hụrụ map emelitere maka GPS tomtom nke nwere ọnọdụ nke radars nke ndị uwe ojii na-ahụ maka okporo ụzọ na Spain ma si otú a ghara ịgabiga pe Daalụ
Biko, kedu ka m ga-esi nweta map nke venezuela maka TOMTOM One gps m ???
Zaghachi Gustavo A.
Ebee ka m ga-ahụ maapụ emelitere nke Europe maka SONY NV-U93T.
Ọfọn, sony ekwughị na ọ naghị ekwu.
Zaghachi ka eacster
Eziokwu bu na gps tom tom bu bullshit, onweghi uzo esi ebu map nke Argentina na poronga na n’elu nke a forums ga-adi ka nke kachasi nma, onye obula ghari na onye wetara gps m
ebe m nwere ike imelite my tomtom one xl for free online.
na south america enwere nani tomtom maps maka Brazil na argentina
north america mexico kwụrụ ọtọ na Canada
in Afrika south Africa
HI. Ọ Ga-amasị m ịma ma ọ bụrụ na e nwere na otu esi budata uzo okporo ụzọ BRAZIL maka OMLỌ
hello enwere m mobile qtek s200 na enwere m tomtom mana achoro m inwe ike imelite ya n'efu, onwere onye ma otu m g'esi mee ya.ekele gi ma i nyere m aka m ga eji obi m dum kelee gi, a ekele na enyi
ONYE MAARA ebe m nwere ike inweta akara ngosi MEXICO NA-EGO N’ TLỌ M N’ MYLỌ N’ANYA 125 SE
N’IHU M NA-EKELE Enyemaka, Daalụ!
Zaghachi ka Palk
KA ANY SE H…… Otu ND ALL ỌZỌ… .MAP maka TOMOM VENEZUELA B .MAGA M GADR A NA NTMENTTA, Ọ D TH KA EBU PARDILLOS NA PLLỌ PANR G ANAKỌRỌ HERE… Naanị ajụjụ na enweghị azịza… ..
Ndewo, achọrọ m ibudata map nke Venezuela na GPS m tomtom, biko chere maka nzaghachi ngwa ngwa ngwa, daalụ.
Onye Victoria dijo
Ọ na-amasị m ịmara ma hụ ọdịdị nke mba niile
n'ihi na onye ọ bụla chọrọ m nwere nke mbụ tomtom onye na-arụ ọrụ na-aga na xl onye ọ bụla chọrọ ya kpọtụrụ m si na Barcelona gasper210688@hotmail.com
biko zitere m ọsọ ọsọ
ndewo onye ọ bụla, m ga-achọ ịmata ihe mbipute TomTom ga-adabara m nke ọma na m Blackberry usoro 8520 ama ma ọ bụrụ na ọ dịghị, ọ bụla mbipute nke Garmi, Sgic ma ọ bụ ọzọ….
Ndewo, chi abọọ, taa azụrụ m na ngwaahịa GPS TOMTOM XL 30 usoro nke mgbe m gbanye ya gwara m enweghị map na ihuenyo ahụ, akpọrọ m ọrụ ọrụ aka ma gwa m na m ga-azụta map ọhụrụ iberia v8.40 nke kwesịrị mado, enwere ụzọ iji nweta ya n'efu ma ọ bụ enwere ụzọ ọzọ iji dozie ya.
Ebee ka m nwere ike ịhụ maapụ Europe maka SONY 93T, ọ ga-ekwe omume inwe ike itinye ndị nke TOM TOM? Onwere onye tinyegoro TOM TOM tinye na SONY 93T?
Ekele m unu niile.
enyi M ga-achọ ịma otú m ga-esi wụnye map nke Panama na GPS m-tom! daalụ !!
Zaghachi ka leider medina
Nke a bụ shit si sony GPS nv-u82s si sony bụ hoax site na sony enweghị ike autolysis sony aghụghọ ndị mmadụ na ha bụ ndị ohi nwere ike itinye ngwaọrụ ahụ ịnyịnya ibu
Ndewo, azụrụ m tomtom go 730 otu ọnwa gara aga ọ naghị agwa m ihe dị ka ọkara rada, echere m na mgbe ịzụrụ ihe ọhụụ, ma map ma rada kwesịrị imelite. Kedu ka m ga - esi budata ma ọ bụ melite ihe a niile, daalụ nke ukwuu.
Ndewo, mmadụ nwere ike ịgwa m ebe m ga-ahụ eserese Spain na Portugal maka tomtom one v8 n'ihi na ndị m tinyere na iberia na-enye m njehie, ọ na-ekwu na ngwaọrụ ahụ ezighi ezi na ọ dị m mkpa ịhazi gps n'ihi o nyere njehie nke ukwuu sketchy ekele.
ụtụtụ ọma, biko, achọrọ m maapụ venezuela maka tom tom one
Adị m ka ọtụtụ ndị ọzọ na-achọ map venezuela maka tomtom gps ...
Enwere sọftụwia nke enwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịtụgharị map Garmin na usoro eji Tomtom gps akpọ gpsbabel ... mana abanyeghị m n'ime ya ...
Ọ bụrụ na mmadụ enweela ihe ịga nke ọma ... Kee ozi ..
Ndewo, mmadụ nwere ike ịgwa m ebe m nwere ike ibudata map nke Italytali na Spain, n'efu maka otu TomTom ahụ.
Kedu ka m ga - esi budata ihe eserese nke Spain na Portugal yana rada na akwụghị penny.
ọma GPS bụ ton ton v4
M nwere a Pda Airis na m chọrọ ka m mara otú e si mara na-emelite tom tom
Zaghachi Jose Granados Parejo
MA NA JUAN dijo
ABEL NA LEIDY H YOUR YOU G YOU n’anya, N DERARR UN N’TB IN INFINITY NA ỌZỌ AYAI
Zaghachi ma NA JOHN
Ndewo, ebee ka m nwere ike nweta maapụ obodo dị ka Otamendi, Miramar, wdg?
Louis macher dijo
Ndewo, m ga-achọ ịma ebe m nwere ike ibudata ma ọ bụ zụta maapụ eserese eserese eserese maka TomTom GPS….
Zaghachi Luis Macher
Ndewo Enwere m tomtom v4 usoro 30/125/130 na m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla emelitere map ma ọ bụ mara ebe m nwere ike ibudata n'efu, m ga-enwe ekele na nke a bụ email m javier.pm74@hotmail.com.
Daalụ Pablo, ha dokwara nsogbu nke map Argentina m mere ka ọ kwụsị dị ka afọ 2 gps m na ndị mmadụ http://www.mapeo-gps.com.ar salu2
Enwerem tomtom one ma amaghi m ka m ga acho map ohuru nke Spain na tomtom m ma onwere onye matara ma banye my msn ke left.
noelia blanco luru nwanyi dijo
Ndewo m nwere mbido tomtom ma ọ ga-amasị m ịnweta ụzọ okporo ụzọ italy. Onwere onye mara ebe m nwere ike nweta ya ?? Daalụ.
Nzaghachi noelia blanco luru
Rafael Melendez si Guaynabo Puerto Rico dijo
Azụtara m GPS MAGALLAN na m kwesịrị imelite ya ma enweghị m ike ịchọta
Kedu ka m ga - esi mee ya ,,, mgbe ha nyere m n'efu m na - anwa ibudata ya wee
A na-akwụ m ụgwọ ma a na m eche ihe ihe okwu a bụ free pụtara, mmadụ nwere ike ịkọwara m ya. Aghọtaghị m
Zaghachi Rafael Melendez si Guaynabo Puerto Rico
Mmeri MENDEZ dijo
Enwere m tomtom gaa 730, m ga-achọ maapụ Mexico iji hụ ma ị nwere ike ịnye m
Zaghachi VICTOR MENDEZ
Ihe m na acho bu NavCore 9.001 nke agwara m na enwere ike itinye ya na GO 720 ...
Na ukara TomTom peeji nke ọhụrụ dakọtara edepụtara dị ka 8.351
Achọrọ m ka ihu akwụkwọ ga-emelite n'efu
Okooko lili nke m ma bụ ndị na-arịọ na nke m nwere n'ime oghere iji tinye map, ị ga-azụ ya dị ka mgbe niile ọ nweghị
Enwere m GPS nke XROAD, mmadụ nwere ike ịgwa m ebe m ga-ebudata maapụ nke MEXICO, m ga-enwe ekele maka ya, ekele gị niile
mmụọ ozi azamar ramirez dijo
N'ehihie, achọrọ m GPS maka ndị na-agba ọsọ egwuregwu. Co nwere ike ịgwa m ebe m nwere ike ibudata ya?
Zaghachi angel azamar ramirez
Kedụ ka m ga - esi mee tom tom tom site na otu obodo dị na Mexico gaa na obodo ọzọ dị na United States Enwere m maapụ mba abụọ ahụ? daalụ.
Zaghachi Edwin Egure
Ndewo, enwere m tom tom 510, ọ ga-amasị m imelite ya, ebe ọ bụ na enwetụbeghị m ya, kedu ka m ga-esi mee ya? Have nwere mmelite ahụ? Nwere ike ịgwa m usoro m ga-eso?
Onwere onye maara ka esi budata map efu nke Mexico ka Tomtom gaa 720 ??? email m bu jalvareal@hotmail.com daalụ !!!
Ndi mmadu nwere ike inyere m aka na Map nke Mexico maka uzo GPS X
Kedu ka m ga-esi nweta maapụ nke Venezuela iji tinye ya na Tom Tom XL 335 SE?
hello Enwere m tom tom otu mbipụta ọhụụ iberia na achọrọ m maapụ niile maka na kaadị ebe nchekwa m mebiri ma ọ gba nkịtị. M ga-enwe ekele maka enyemaka gị
Kwere na eserese
Ndị enyi, kedu ka ị mere, biko nyere m aka. Enwere m tomtom one gps na enweghị m ike ịhụ otu esi budata map nke Venezuela ebe m bi ebe a ... biko nyere m aka
Enwere onye nwere ike inye m aka, enwere m ezigbo tom tom 720 na m na-achọgharị ụbọchị na ịntanetị iji budata map ndị ahụ, enweghị m ike ịnweta ha, biko ọ bụrụ na enwere onye maara ntakịrị ihe gbasara isiokwu a. , nyere anyị aka,
Ana m ekele gị nke ukwuu na ekele
Ebee ka m nwere ike ịhụ maapụ maka Sony 93T.
Enweghị m ike ịhụ ha ebe ọ bụla.
M nwere airis 509 PDA na m nwere TomTom 6 na m chọrọ emelitere map nke Iberia
Ndewo, enwere m Aviton GPS ma achọrọ m ịhụ ebe m nwere ike ibudata maapụ Mexico na nke kachasị mma
Ezi ụtụtụ, lee ebe m nwere ike ibudata eserese kachasị onwe nke Venezuela maka tomtom one xl
Zaghachi wilfredo martinez
Ndewo ENGO UN TOMT ONE XL EUROPE.
Achọrọ m imelite ya mana na websaịtị gọọmentị ọ dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na mmadụ maara etu esi melite maapụ maka gps a biko enwere m ya ugbu a
Ndewo ndị enyi, gbaa m ume ka m lee ma ọ bụrụ na e nwere onye na-ekesa TOMTOM na Guadalajara, enwetara m otu na usa ma ọ na-ada m.
Zaghachi MARGARITA DE LA TORRE
Enwere m nsogbu na m tomtom mod XXL 550-T, m wetara ya na usa ma na mberede na ihuenyo gbanwere ọbara ọbara na akụkọ mgbe ochie na-egosi na enwere m nsogbu na eserese ma site ebe ahụ enweghị m ike ịpụ, mmadụ nwere ike ịgwa m ihe mere ya na ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla esi arụkwa ya ekele m.
Ekele mmadụ niile, enwere m Tomtom Wireless MkII gps, ya bụ, ọ na-ejikọ site na Bluetoth na Palm Treo 650, nsogbu bụ na achọrọ m map Dominican Republic iji budata ha. lee ma onwere onye na-enyere m aka ịchọta ebe m ga-achọta ha
M na-azụta ụlọ ụtụtụ na-aga 730 GPS maka VENEZUELA NA Enweghị m ike iji ya n'ihi na anaghị m egwu egwu maka VENEZUELA CAN P HREL IME M ekele
Zaghachi FRANCISCO PEREZ
Ekele m enwerem tomtom one amaghikwam esi melite ya.am si na enwere program
enwere onwe m mana ọ gaghị ekwe m bata. M ga-enwe ekele maka enyemaka gị, daalụ
Zaghachi juan perez
Ruo afọ ole na ole, azụrụ m tomtom one xl europe ma kemgbe ahụ emelitereghị m ya, kedu ka m ga-esi nweta maapụ ugbu a nke gps a?
M bi na Madrid na dịka m na-agwa gị, achọrọ m mmelite nke ihe nlereanya a.
Achọrọ m ịjụ gị, enwere ike mgbe ị na-emelite map ndị GPS ga-ebu m?
Enwere m olileanya na enyemaka gị
Ugbu a weebụsaịtị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu anaghị arụ ọrụ, ịnwere ike imelite na laradiobbs.net ma ọ bụ gps-experts.org
Naanị ha wetara m udo tomtom ma achọtaghị m ụzọ m ga-esi budata maapụ Venezuela, agụrụ m edemede dị ugbu a mana ọ pụtaghị na weebụsaịtị webụsaịtị
Ndewo dị nnọọ ka onye ọ bụla, M bi na ENSENADA BC MEXICO M ga-achọ ka unu nyere m aka nbudata map nke Mexico, ebe ọ bụ na m nwere ụlọ otu akwụkwọ nke atọ na anaghị m achọta otu esi eme ya
Zaghachi SANTOS SANCHEZ
Enwere m tomtom xl na amaghị m otu m ga - esi emeli maapụ mba m «Ecuador», ihe niile nihi na otu ngwaọrụ ahụ anaghị amata ya, achọrọ m ka tomtom sistemu kapịrị ọnụ ka m nwee ike iburu wepụ mmelite na weebụ.
M ga-enwe ekele maka enyemaka ahụ
Zaghachi cesar anibal nieto G.
Biko ị nwere ike inyere m aka ka m nwere ike ịchọta maapụ Morocco ma ọ bụ Africa… .. Daalụ nke ukwuu….
Zaghachi ka edou
Ndewo, azụrụ m tomtom site na 1505 t na usa na achọrọ m ibudata map nke Argentina n'efu, kedu ka m ga-esi mee ???
ezi map ka argentina maka GPS tomtom 310, site na ja ekele
Ọ dị ezigbo mma m ga - achọ ịma ma ọ bụrụ na mmadụ ga - enyere m aka ịchọta ebe m ga - ahụ obodo Ecuador maka TLỌ MGBE AH GPS GPS ONE. daalụ
Amaghị m ihe kpatara eji wepụta gt tomtom a na ahịa ọ bụrụ na ọ na-esiri m ike inweta map gọziri agọzi !! Achọrọ m maapụ nke Ecuador rrrrrr ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara otú m ga-enwe ekele maka ha
Enwere m tomtom go 730 Achọrọ m imelite map nke N'ezie n'efu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ebe m ga-enweta ha, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa m
Ndewo… Onye ọ bụla na-enyere m aka nwere tomtom gaa 710 na maapụ Europe, kedu ka m ga esi esi maapụ United States… daalụ
ezigbo abalị enwere m gps tom tom340 xl dị ka gara aga iji budata maapụ venezuela Achọrọ m enyemaka na ekele a
Zaghachi andres alcala
Azụrụ m TomTom XXL, mana enweghị m ike ịchọta map nke Venezuela iji kwado ha, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka, opekata mpe maka isi obodo m ga-enwe ekele maka ya. Daalụ nke ukwuu.
Ezi! Mmadu enwere ike inyere m aka? n'ihi nsogbu m furu efu map na Tomtom ONE, mmadụ enwere ike inyere m aka inweta nke ugbu a na onye nkwado? na-akpa ọchị
M agbanweela ihe niile site na Sony 93T na Igo 8 ma ọ na-esi na p ... nne, ezigbo mma na maapụ emelitere, radars na poi.
Ọ ga-amasị m ibudata maapụ emelitere maka tom tom xxl maka south africa, ị nwere ike inyere aka? Daalụ n'ọdịnihu
Zaghachi javier lopez iglesias
Eriri a emeela ochie, a ga-ehichapụ ya ka saịtị emechiri emechi emechila ọtụtụ afọ.
Ndị nwere mmasị nwere nhọrọ nke GPS-ọkachamara. org
Echere m na ọ ga-ejere gị ozi
A KWESR THIS KWES .R..
Emechie weebụsaịtị ha nyere emechi afọ
Zaghachi juan andres
Achọrọ m imelite maapụ m 7 ″ jpc igodo ma ọ bụrụ na ihe nwere otu ihe a
Zaghachi Guillermo Acuña Garrido
Achọrọ m maapụ dị ugbu a spain tomtom tomtom one 3 mbipụta
Ndewo, lee ma mmadụ enwere ike inyere m aka. Enwere m PC akpa na onye na-ere ere arụnyere Tomtom maka m ihe dịka 7 afọ gara aga, yana maapụ nke Iberia na Canary Islands. Ugbu a, m na-aga Brazil ma achọrọ m itinye map nke mba ahụ mana enweghị m ike ịchọta ngwa n'efu. Biko, ị nwere ike ịgwa m ebe m ga-enweta ya?
Ramiro. Anọ m na Colombia, gịnị ka m kwesịrị ịgbanwe na maapụ Medellin?
Ndewo, a bụ m onye Chile na achọrọ m maapụ maka obodo m.Enwere tom tom ONE (30 Series) / 125/130 - 1GB TTS * biko gwa m ma enwere maapụ Chile ma ọ bụ na ọ bụghị, daalụ
Zaghachi rodolfo leon diaz
Ndewo, ị nwere ike inyere m aka? Azụrụ m TOMTOM na m ga-achọ ịma ma ị nwere maapụ nke Venezuela
Ndewo. Enwere m TOMTOM VIA 1500M SE, m ga-achọ ịhazi ya ka ọ rụọrọ m ọrụ na Dominican Republic, ebe ọ bụ na etinyeghị ya n'ọtụtụ mba ọ nwere. M ga-enwe ekele maka enyemaka ọ bụla na nke a.
Zaghachi Rogelio Quezada Sepúlveda
Enwerem gps dash mw 710 gtv i mara ihe sistemụ iji melite ya? Ha gwara m na ọ nwere ike ịbụ Tom Tom mana achọghị m ọgbaghara
daalụ nyere aka biko
Ndewo, enwere m tontom tinye na enweghị m ike ịnweta ya ịnabata koodu UK na Holland, ọ bụrụ na mmadụ maara ihe m ga-eme biko nyere m aka, Daalụ.
Hahaha, hahaha, hahaha, haha ​​M wee daa ọchị !!!!! Na-azụta GPS ị maghị ma ọ bụrụ na ị nwere map nke mba gị.
LOL. Site n'ụzọ, ekele gị onye rere ya gị. LOL
Miguel, iberibe. Buyzụrụ GPS na mba ọzọ ọ na-azọpụta ndụ gị ebe ahụ. Mgbe ahụ ịlaghachi obodo gị ma chọpụta na ị nweghị ike itinye akwụkwọ map ndị ọzọ na ya na-akwụghị gị nnukwu ego. Nke ahụ bụ ihe ndị mmadụ na-achọpụta. I bu onye nzuzu na obi uto na inu.
onye ara mebiri dijo
Esi m Medellin Colombia Achọrọ m imelite maapụ ahụ
Zaghachi onye nzuzu
Ndewo obi ekele Gị ... ị mezuru map ndị ahụ
Zaghachi WILMAR VANEGAS M
Achọrọ m ịhụ maapụ usa na mba anaghị apụta na nhọrọ ahụ
ibu eboro dijo
Na Venezuela e nwere ụzọ ?????????????
Onye nwere ike inyere m aka imelite maapụ tomtom nke na-abata na renault rlink. Ejirila mbipute nkewa nke 925275. Daalụ n'ọdịnihu.
Kedu ka hel si eme ka album TOMTOM a gọziri agọzi pụtara na PC m ?????????????????
Ndewo Enwere m tomtom mana enwere m ya na eserese nke Spain na Portugal Achọrọ m ịgbanwe ha maka ndị nke Ecuador ebe m bi na mba a, mmadụ nwere ike inyere m aka ebe m ga-enweta map ndị a nke Ecuador ekele m ozi mauriciocalle1222@gmail.com
Ihe m chọrọ bụ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume iji duzie m na usoro iji melite ụtụtụ XL GPS Daalụ
hi i nwere tomtom star25 ma jiri usa map uu na onye ọzọ si USA, Canada Mexico. mana m chọrọ si Argentina ma ọ bụ South
Nzaghachi omar david
Enwere m TOMTOM XXL zụrụ ma jiri mba ọzọ. Ugbu a m laghachiri biri na Argentina, enweghị m ike ịchọta ụzọ maka Tom Tom Home ma ọ bụ MyDrive Jikọọ ịnabata na m zụtara maapụ Argentina na ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa (ma e wezụga maapụ mba nke m biri ruo ọtụtụ afọ), ebe ọ bụ na njedebe nke usoro ịzụta na mgbe m banyere nkọwa nke kaadị akwụmụgwọ m, windo na-egosi mgbe niile na-ekwu na njehie dị ... wdg. wdg. M mepere akaụntụ ohuru na TOM TOM Home site na Argentina ma ọ nweghị nwanne nne gị, ị nweghị ike ịzụta ihe ọ bụla.
Nwere ike inye m ndụmọdụ otu esi azụta map site na weebụsaịtị gị?
Zaghachi Juan Miguel Cassissa
Enwerem tom tom otu oge, ma nke bu eziokwu bu na efunahuru m kaadi nke webatara map a, obu kaadi sd ka odi, achoro m itinye ozo ya na eserese, o chere na onwere uzo iji wụnye ha site ọkọ, bụ na m na-ele anya mgbe niile iji kwalite ma ọ bụghị maka echichi site ọkọ.
Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka, daalụ.
Enwere m TomTom One nwere maapụ US yana achọrọ m itinye maapụ Uruguay na ya, kedu ka m ga-esi?
Enwerem VIA tomtom V1400 XNUMX. Enweghi m ike iji ya, abum onye Venezuela. M na-eche na ọ dakọtara na map anyị?
Zaghachi ana torres
Ndewo ụbọchị ọzọ otu enyi nyere m tomtom 3rd ọgbọ nke 512 mb ma nye m ya formatted na fat32 na ọ nweghị ihe wụnye gị omume tupu ịkwanyere ya ùgwù dị ka tomtom na-ekwu ma wụnye mmelite niile m gbanye ya ma hazie ya gwaa m na enweghi map di, gini ka m ga eme?
Adị m ọhụrụ ka nbudata wdg.
Enwere m Tomtom Go 720. Ebe ọ bụ na azụrụ m ya, naanị m jiri map ndị sitere na ndabara, ana m ekwu maka ọtụtụ afọ.
N'ezie, map ndị m na-ahụghị ọtụtụ okporo ụzọ dị ugbu a, n'okporo ámá, wdg.
Enweghị m ike imeli na ọnọdụ m ugbu a ịzụta ngwugwu ọ bụla nke maapụ ọhụụ ma amaghị m otu esi amalite ibudata ngwugwu si Spain n'efu, maka ụdị tomtom a ma wụnye ya.
Onwere onye nwere ike inyere m aka?
Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka maapụ Ecuador. Achọrọ m ngwa ngwa
Zaghachi Flavio Perego
ebee ka m nwere ike ibudata maapụ ecuador ..
ndewo, achọrọ m ibudata map ma ọ gaghị ekwe m
Zaghachi ka eric
Achọrọ m ibudata maapụ Panama. Ọ ga-abụ na nke a anaghị arụ ọrụ. Enwere m Tom Tom 600. Achọrọ m enyemaka ọsọ ọsọ.
Zaghachi Luis Chamorro
Ndewo manolo, ị gaghị ekwe ka m budata map ahụ ọbụlagodi na m ghọrọ onye otu na nzukọ a, enwere ihe dị mfe?
Kedụ ka m ga - esi melite eserese Iberia na igwe esere ọsọ na XL? In tomtom ọ na-agwa m dakọtara mgbe etinye Oghere Usoro ọgụgụ
Francisco Bolivar dijo
Ndewo, a bụ m Francisco na m ga-achọ imelite Tom Tom ONE kpochapụwo na maapụ emelitere nke Spain na Portugal, ugbu a ọ nweghị map ọ bụla ka m wee gbalịa imelite ya na Tom Tom na maapụ ahụ m nwere ehichapụrụ. I meela nke ukwuu.
Zaghachi Francisco Bolívar
Achọrọ m imelite GPS na Tom Tom usoro SD kaadị nke ụgbọala m Fluence 2017 nke na-anaghị abịa na eserese nke Brazil ma ọ bụ Chile na m ga-achọ ịwụnye ya na kaadị ahụ, echere m ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ha zitere m otu esi mee ya
Fuckin 'mgbasa ozi anaghị ahụ ihe ọ bụla, na-emejọ renegade jeep shit
Ndewo m nwere tom tom one 2 edition na m ga-achọ imelite ya na iberia map 1020, ọ nwere navcore 9510 na bootloder 5.5136, ọ ga-ekwe omume? ị nwere nkuzi ọ bụla emelitere maka isiokwu a.